Dubbii fi Hojii Iimaana Diigan Archives - Page 2 of 6 - Ibsaa Jireenyaa
August 11, 2020 Sammubani Leave a comment
Wa’da jechuun waan gaariin waadaa galuudha. Wa’iid immoo zaachadha.
2-Wanta wa’da fi wa’iidatti amanuun of keessatti qabatu keessaa tokko: Jannataa fi ibiddatti amanuudha. Innis, isaan lamaan akka jiran, uumamtoota ta’uu, amma jiraachu isaanii fi kan hin bannee ta’uutti amanuudha. Keeyyattoonni Qur’aanaa fi Sunnah haala fi amaloota Jannataa fi ibidda dubbachu keessatti wal duraa duuban dhufanii jiru. Haaluma kanaan, aalimman Islaamaa kana irratti wali galanii jiru. Wali galtee kana beektonni baay’een ni dubbatu. Isaan keessaa mee muraasa haa kaasnu:
August 10, 2020 Sammubani Leave a comment
Wa’da fi Wa’iida mormuu fi itti qoosu
Wa’da jechuun waadaa dha. Akka lugaa Arabifaatti Wa’da waan gaarii fi badaa keessatti itti fayyadaman. Ni jedhama: wa’dtuhu kheyran (waan gaarii isaaf waadaa gale.) Wa’dtuhu sharran (sharrii isaaf waadaa gale). Kheeyri fi sharrii yoo addaan baasan, kheeyri keessatti wa’da (waadaa) jedhan, sharrii keessatti immoo wa’iid jedhan. (Kanaafu, wa’da jechuun waan gaarii waadaa galudha. wa’iid immoo waan badaan (sharriin) itti dhaadachu ykn zaatudha.)
July 27, 2020 Sammubani Leave a comment
Du’aan Booda Kaafamuu Mormuu
1-Akkuma beekkamu Guyyaa Aakhiratti amanuun arkaana iimaanaa jahan keessaa tokkoodha. Guyyaa Guddaa kana dubbachuu fi bakka baay’etti isa mirkaneessutti Qur’aanni kabajamaan xiyyeefannoo itti kennee jira. Tooftaa baay’eetti fayyadamuun akka argamu jabeessee jira. Guyyaa Qiyaamatti amanuu Rabbitti amanuun wal qabsiise. Akkuma jecha Rabbii olta’aa keessatti dhufe: